Media sy Fanoratan-gazety · Marsa, 2009 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Marsa, 2009
Jona 2022 8 Lahatsoratra
Mey 2022 11 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Marsa, 2009
Serbie : Fahatsiarovana ny faha10 taona nandarohan'ny OTAN baomba
Serbia 29 Marsa 2009
Ny 24 martsa 1999 no nanomboka nanafika an'i Serbie sy Montenegro ny OTAN. Naharitra 78 andro ny fandarohana baomba. An'arivony vitsivitsy ny olona maty tamin'izany, ary tranobe maro, tetezana, lalamby, lalana ary orinasa maro koa no potika. Ary fanampin'izany, olona maro no mbola miaina ny vokatra ara-pisainana sy ara-batana noho...
Kazakhstan: Tantaran’ny Krizy teo amin’ny tontolon’ny blaogy
Kazakhstan 14 Marsa 2009
Manohy manaraka akaiky ny toe-draharaha ao amin’ny firenena sy ny fikasan’ny governemanta hamerina ny toe-karena sy ny tontolo hafa eo amin’ny fiainana ara-tsosialy ho “fehezina amin’ny fomba mivantana (fanaraha-maso an-tanana)” ireo mpamaham-bolongana ao Kazakhstan Mitanisa I Dass, minisitry ny asa izay nanambara tao amin’ny fivoriamben’ny governemanta fa manodidina ny 900...
Fiombonambe Eropeana-Ukraine: Resaka fifanatonana.
Albania 14 Marsa 2009
Nambara ampahibemaso tao amin'ny EU-Ukraine Summit tany Paris tamin'ny 9 septambra ny fikasan'ny Fiombonambe Eropeana hanamafy ny Fifanekem-piaraha-miasa miaraka amin'ny Ukraine tamin'ny 2009. Fomba samihafa no nentin'ny haino aman-jery sy ny mpitoraka blaogy maro nandray izany. “Manolotra antoka ho an'i Ukraine ny Fiombonambe Eropeana,” hoy ny lohatenin'ny BBC. “Tsy mampanantena...
Amerika Latina 08 Marsa 2009